ကားတစ်စီးကို မဝယ်ခင် ဘာကြောင့် Test Drive ပြုလုပ်သင့်သလဲ ? - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > News > Local Updates > ကားတစ်စီးကို မဝယ်ခင် ဘာကြောင့် Test Drive ပြုလုပ်သင့်သလဲ ?
လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ကားတစ်စီးကို ဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင် အမြင်ထက် လက်တွေ့ကျကျ သေချာစွာသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို အရင် စုံစမ်းလေ့လာသင့်ပါတယ်။
ကားမဝယ်ခင် Test Drive ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကားအတွင်းခန်းက မိမိနှင့် မိသားစုအတွက် ဘယ်လောက်သက်သောင့်သက်သာရှိစေတယ် ၊ မောင်းနှင်မယ့်ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေမှုရှိမရှိ သေချာစွာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကားရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ Performance ပိုင်းကိုလည်း သိရှိနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ ကားရဲ့ Safety Feature တွေကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာကို သေချာစွာလေ့လာသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းအနေနဲ့ ကားသစ်တစ်စီးဝယ်ယူတော့မယ့်ဆိုရင်တော့ မဝယ်ယူခင် ရွေးချယ်မှုမမှားရလေအောင် Test Drive မောင်းနှင်းပြီး သေချာစွာ လေ့လာကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Showroom Hotline (YGN) – 09 420 778 210, 09 771 509 086
Showroom Hotline (MDY) – 09 964433611, 09 797 291 830
Ford Myanmar Sale & Promotion (Telegram Channel)
Link – https://t.me/fordmmsale
Ford Myanmar Aftersales Service (Telegram Channel)
Link – https://t.me/fordmmafs